Faucets Down ဆွဲ
အိုး Filler Faucets
ပင်မစာမျက်နှာ / ရေချိုးခန်း Faucets / ရေချိုးခန်း Faucets နှစ်ဆကိုင်တွယ်ပါ / WOWOW ရေချိုးခန်းနစ်မြုပ်နေသော Faucet Brushed Nickel များပျံ့နှံ့သွားသည်
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 4.945ထဲကအပေါ်အခြေခံပြီး 18 ဖောက်သည် ratings
အမေဇုံကိုအမေရိကန် အမေဇုံ, CA
2321300 installation ကိုညွှန်ကြားချက်
နိုင်ငံတစ်ခုရွေးပါ အော်လန်ကျွန်းစုအာဖဂန်နစ္စတန်အယ်လ်ဘေးနီးယားအယ်လ်ဂျီးရီးယားအမေရိကန်ဆာမိုအာအင်ဒိုရာအင်ဂိုလာနိုင်ငံအန်ဂွီလားအန္တာတိကဂွါနှင့်ဘာဘူဒါအာဂျင်တီးနားအာမေးနီးယားယူးဘားၾသစေတးလ်သြစတြီးယားအဇာဘိုင်ဂျန်ဘဟားမားဘာရိန်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘာဘေးဒိုးစဘယ်လာရုစ်Belauဘယ်လ်ဂျီယမ်belizeဘီနင်ဘာမြူဒါဘူတန်ဘိုလီးဗီးယားBonaire, စိန့် Eustatius နှင့်ဆာဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားဘော့ဆွာနာဘူးဗက်ကျွန်းဘရာဇီးဗြိတိန်နိုင်ငံကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကိုဘရူနိုင်းဘူလ်ဂေးရီးယားBurkina Fasoဘူရွန်ဒီကမ္ဘောဒီးယားကင်မရွန်းကေနဒါကိပ်ဗာဒီကေမန်ကျွန်းစုဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံချဒ်ချီလီတရုတ်နိုင်ငံခရစ္စမတ်ကျွန်းကိုးကိုစ် (ကီးလင်) ကျွန်းများကိုလံဘီယာကော်မ္မရိုဇ့်ကွန်ဂို (ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ)ကွန်ဂို (ကင်ရှာဆာ)ကွတ်ကျွန်းစုကော့စတာရီကာခရိုအေးရှားကျူးဘားကူရကာအိုဆိုက်ပရပ်စ်ချက်သမ္မတနိုင်ငံဒိန္းမတ္ဂျီဘူတီနိုင်ငံဒိုမီနီဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံအီကွေဒေါနိုင်ငံအဲဂုတ္တုပြည်၌အယ်လ်ဆာဗေးဒေါအီကွေတာဂီနီနိုင်ငံအီရီထရီးယားအက်စ်တိုးနီးယားအီသီယိုးပီးဖောက်ကလန်ကျွန်းစုဖရိုးကျွန်းစုဖီဂျီဖင်လန်ပြင်သစ်ပြင်သစ်ဂီယာနာပြင်သစ်ပိုလီနီးရှားပြင်သစ်တောင်ပိုင်းနယ်မြေgabonဂမ်ဘီယာGeorgiaဂျာမနီဂါနာဂျီဘရောလ်ဂရိနိုင်ငံဂရင်းလန်းနေးဒါGuadeloupeဂူအမ်ကျွန်းဂွာတီမာလာဂါဇီးဂီနီနိုင်ငံဂီနီဘစ်ဂိုင်ယာနာဟေတီဟာ့ကျွန်းနှင့်မက်ဒေါ်နယ်ကျွန်းများဟွန်ဒူးရပ်စ်ဟောင်ကောင်ဟန်ဂေရီအိုက်စလန်အိႏၵိယအင်ဒိုနီးရှားအီရန်အီရတ်အိုင်ယာလန်လူသား၏ကျွန်းဣသရလေအီတလီအိုင်ဗရီကို့စ်ဂျမေကာဂျပန်ဂျာစီယော်ဒန်မြစ်ကာဇက်စတန်ကင်ညာကီရီဘာတီကူဝိတ်ကာဂျစ္စတန်လာအိုနိုင်ငံလတ်ဗီးယားလေဗနုန်တောလီဆိုသိုလိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံလစ်ဗျားနိုင်ငံလီချင်စတိန်းလစ်သူလူဇင်ဘတ်မကာအိုဒါဂတ်စကာမာလာဝီမေလးရွားမော်လ်ဒိုက်မာလီမော်လ်တာမာရှယ်ကျွန်းစုမာတီနစ်Mauritaniaမောရစ်ရှမာယော့တ်မက္ကစီကိုMicronesiaမော်လ်ဒိုဗာမိုနာကိုမွန်ဂိုလီးယားမွန်တီနီဂရိုးမွန်ဆာရတ်မော်ရိုကိုမိုဇမ်ဘစ်ျမန္မာႏုိင္ငံနမီးဘီးယားNauruနီပေါနယ်သာလန်နယူးကယ်လီဒိုးနီးယားနယူးဇီလန်နီကာရာဂွာနိုင်ဂျာနိုင်ဂျီးရီးယားနီယူးNorfolk ကျွန်းမြောက်ကိုရီးယားမြောက်အမေရိကမက်ဆီဒိုးနီးယားမြောက်ပိုင်းမာရီယာနာကျွန်းများေနာ္ေဝးအိုမန်ပါကစ္စတန်ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေတွေကိုပနားမားပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံပါရာဂွေးပီရူးဖိလစ္ပုိင္Pitcairn-ပိုလန်ပေါ်တူဂီPuerto Ricoကာတာနိုင်ငံပြန်လည်ပူးပေါင်းခြင်းရိုမေးနီးယားရုရှားနိုင်ငံရဝမ်ဒါစဝ်တုန်နှင့်ပရစိန့်ဘာသယ်လဲမီစိန့်ဟယ်လီနာစိန့်ကစ်နှင့်ဗစ်စိန့်လူစီယာစိန့်မာတင် (ဒတ်ချ်အစိတ်အပိုင်း)စိန့်မာတင် (ပြင်သစ်အစိတ်အပိုင်း)စိန့်ပီယားနှင့်မီကွီလွန်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်းဆာမိုအာဆန်မာရီနိုဆော်ဒီအာရေဗျsenegalဆားဘီးယားseychellesဆီယာရာလီယွန်စင္ကာပူႏုိင္ငံဆလိုဗက်ကီးဆလိုဗေးနီးဆော်လမွန်ကျွန်းစုဆိုမာလီယာတောင်အာဖရိကတောင်ပိုင်းဂျော်ဂျီယာ / Sandwich ကကျွန်းစုေတာင္ကုိးရီးယားတောင်ပိုင်းဆူဒန်စပိန်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံဆူဒန်ဆူရာနမ်Svalbard နှင့်ဇန်နဝါရီ Mayenဆွာဇီလန်ဆြီဒင္ႏုိင္ငံဆွစ်ဇလန်ဆီးရီးယားထိုင်ဝမ်Tajikistanတန်ဇန်းနီးယားထုိင္းႏုိင္ငံအရှေ့တီမောတိုဂိုအဘိဓါန် TokelauTongaထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုတူနီးရှားကြက်ဆင်တာ့ခ်မင်နစ္စတန်တူရကီနှင့်စိုးကော့စ်ကျွန်းများTuvaluယူဂန်ဒါနိုင်ငံယူကရိန်းအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း (ဗြိတိန်)ယူနိုက်တက်စတိတ် (ယူအက်စ်)ယူနိုက်တက်စတိတ် (ယူအက်စ်) မိုင်းနားပြင်ပကျွန်းများဥရုဂွေးဥဇဘက်ဗာနူအာဗာတီကန်ဗင်နီဇွဲလားဗီယက်နမ်Virgin Islands (ဗြိတိန်နိုင်ငံ)Virgin Islands (ယူအက်စ်)Wallis နှင့် Futuna-အနောက်တိုင်းဆာဟာရယီမင်ဇမ်ဘီယာဇင်ဘာဘွေ
ရေချိုးခန်း Faucet တွင်ကျယ်ပြန့်သော Brushed Nickel 2321300 အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
တီထွင်ဆန်းသစ်သောမြန်ဆန်သောဆက်သွယ်မှုနည်းပညာ - မူလတီထွင်ဆန်းသစ်သောအမြန်လင့်ခ်တည်ဆောက်မှုသည်ရေပိုက်သမားမရှိဘဲသင်၏ကိုယ်ပိုင်တပ်ဆင်ရန်ရိုးရှင်းပါသည်။ သစ်သား faucet နှင့်အတူပိုက်တပ်ဆင်တာဝန်ခံချွေတာ!
ရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်မှုအတွက် ၄-၁၆ လက်မအကျယ်အ ၀ န်းရှိ layout ပါ ၀ င်သောအပေါက် ၃ ခုပါသော bracket သည်။
Spout faucet brick nickel အဆုံး:2လက်ကိုင် faucet brushed nickel layout စတိုင်ဂန္ retro retro ။ လက်ဗွေဆုံးရှုံးမှု, ချေးကိုတွန်းလှန်။ အိမ်တစ်ခန်း၊ တိုက်ခန်းတစ်ခန်း၊ မော်တာအိမ်များ၊ ခရီးသွားနောက်တွဲယာဉ်နှင့်အိမ်သုံးအတွက်ငှားရန်လက်ခံနိုင်သောကုန်းပတ်သည်အချည်းနှီးတပ်ဆင်ထားသည်။
Faucet သည် ၃ နှစ်အာမခံချက်ဖြင့်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဖြစ်သည်။ abs aerator သည်ရေနှင့် ၅၀% ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၎င်းကိုသင်၏လက်ဖဝါးဖြင့်ဆေးကြောသန့်စင်နိုင်သည် (ဝယ်လိုအားမရှိသောကိရိယာများ) ။ ယို - အခမဲ့ကြွေထည်မြေထည်ပစ္စည်းအောင်မြင်သည်။
SKU: 2321300 Categories: ရေချိုးခန်း Faucets, ရေချိုးခန်း Faucets နှစ်ဆကိုင်တွယ်ပါ Tags: အင်တုံရောနှော, သုံးပေါက်အိမ်သာ, ပျံ့နှံ့
12.1 x ကို 8.6 x ကို 3.1 လက်မ
သွပ်သတ္တုစပ် / သံမဏိ / ကြေးဝါ
၃ အပေါက်၊ ကျယ်ပြန့် faucet
မှုန်ရေမွှား mode ကို
ကျယ်ပြန့် faucet: 8-16 လက်မ
ကျယ်ပြန့်သော Faucet * 1၊ တပ်ဆင်မှုအသေးစိတ်အချက်များ * 1၊ ပေါ်ပေါက်ရေနုတ်မြောင်း * 1
S က *** င2020-04-15
ဒါကအရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ရှာဖွေနေ faucet ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်လွယ်ကူစွာသွားခဲ့သည် (ညွှန်ကြားချက်များကိုသုံးပါ) နှင့်ရေပိုက်များနှင့် pop.up ယိုစီးမှုနှင့်အတူလာ၏။ ဒီဟာငါအရင်ဆုံးပေါ်လာခဲ့ ငါကြိုက်လိမ့်မယ်ထင် ဒီတစ်ခါလည်းသူကဆံပင်အများကြီးစုဆောင်းမည်မဟုတ်နှင့်သန့်ရှင်းရေးခံရဖို့ရှိသည်။ ဒါကစုံတွဲတစ်တွဲတည်းမှာသာဖြစ်လို့အသက်ရှည်ခြင်းကိုမှတ်ချက်မပေးနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်ဒါကိုထပ်မံမှာချင်ပါတယ်
တစ်ဦးက *** y က2020-04-18
ကောင်းစွာထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ကောင်းသောရှင်းလင်းသောညွှန်ကြားချက်များ။ ကောင်းပြီ Installed ။ ကျယ်ပြန့် faucet များအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောစျေးနှုန်း။ ငါစမ်းကြည့်လိုက်ရင်ငါလိုအပ်တာနောက်တစ်ခုပြောင်းဖို့မတွန့်ဆုတ်ဘူး။ အဆိုပါနှင်းဆီတစ်ကောင်းတဲ့ထိတွေ့ဖြစ်ခဲ့သည်
အီး *** တစ်ဦး2020-04-19
ရိုးရှင်းစွာတပ်ဆင်ရန် ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်ခန့်ကြာသည်။ DIY အတွက်အင်ဂျင်နီယာနှင့်ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၇၀ နီးပါးရှိပါပြီ၊ အချည်းနှီးသောအရာအောက်တွင်ကန့်လန့်ကာအင်ဂျင်တပ်ဆင်ထားမှုထက်ပြန်ကျလာရန်အချိန်ယူရပါသည်။ တပ်ဆင်ပြီးနောက်စမ်းသပ်ပြီးနှင့်ယိုစီးမှုသို့မဟုတ်အစာကျွေးအတွက်ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိ။ ထုတ်ကုန်အားဖြင့်အလွန်သဘောကျသည်။ ငါတပ်ဆင်ထားသမျှအားလုံးကိုအမဲဆီပြုခဲ့သော်လည်းဆက်သွယ်မှုအားလုံးအေးခဲနေသောကြောင့် faucet အဟောင်းကိုဖယ်ရှားရန်မှာနှစ်ရက်ကြာသည့်အတွက်ကြောင့် စျေးနှုန်းသည်လည်းကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးအတွက်အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်ညွှန်ကြားချက်များပင်လိုအပ်သည်။
ကို C *** ဋ2020-04-21
faucets ယနေ့အပ်နှင့်တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ကြီးမားသောသေတ္တာစတိုးဆိုင်များတွင်ချိုသာသော faucets များ၊ Delta သို့မဟုတ် Pfister စျေးနှုန်းထက်ဝက်ခန့်ရှိသည်။ သူတို့သည်မည်မျှကြာရှည်စွာကိုင်တွယ်နိုင်သည်ကိုမသိပါ။ သို့သော်၎င်းတို့တွင်ကောင်းမွန်သောခံစားမှုရှိပြီးတပ်ဆင်ခြင်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ Pop up drain သည်ဤစျေးနှုန်းနှင့်အလွန်ကောင်းသည်။ တန်ဘိုး၏အောက်ဘက်မှပူ / အအေးလက်ကိုင်ကိုတင်းကျပ်ရန်အသုံးပြုသောဝက်အူနှစ်ခုပျောက်နေသောကြောင့်ကြယ်တစ်ပွင့်ကိုဖြတ်တောက်သည်။ ငါပါဝင်သည်ခွံမာသီးကိုသာအသုံးပြု။ install လုပ်ပေမယ့်လက်ကိုင်ချသော့ခတ်ဖို့ screw နှစ်ခုအရေးပါဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့အထုပ်၌မပါ။
S က *** ဎ2020-04-23
၎င်းသည်စျေးသိပ်မကြီးသောတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သည်။ လမ်းညွှန်သည်ရေပိုက်နှင့်မကိုက်ညီသော်လည်း… WOW !! အစိတ်အပိုင်းများ၏အရည်အသွေးကိုကျွန်တော်အံ့အားသင့်စွာဖြင့်တပ်ဆင်ရခြင်းသည်အလွန်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၌စာသားအရအသုံးမပြုနိုင်သောအလွန်စျေးကြီးသော Price Pfister ကိုအစားထိုးခဲ့သည်။ သံချေးနှင့်သံချေးခြင်းကြောင့် Pfister ကိုဖယ်ထုတ်ရန်အချိန် ၅.၅ နာရီကြာသည်။ အမှန်တကယ်ရေပူလက်ကိုင်မှအပေါ်ဆုံးအဝတ်လျှော်ကိုကျောက်စရစ်နှင့်ချွတ်ရန်အတွက်နစ်မြုပ်၏ထိပ်ကို ဖြတ်၍ ချလိုက်ရသည်။ ဒီ WOWOW faucet အသစ်ကိုတပ်ဆင်ခြင်းကတစ်နာရီတောင်မပြည့်နိုင်ပါဘူး။ ဝယ်လိုက်ပါ! တစ်နှစ် (သို့) နှစ်လောက်သာကြာရင်တောင်မှ (AZ ရေခဲရေနဲ့တောင်ကြာရှည်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထား) တောင်ဘယ်သူ့ကိုဂရုစိုက်မှာလဲ။ ဒီစျေးနှုန်းမှာအခြားတစ်ခုဝယ်ပြီးအချိန်မရွေးပစ်ချပါ။ ငါလုံးဝ, အပြုသဘောနောက်တဖန်ဒီဝယ်လိမ့်မယ်!
J ကို *** ဃ2020-04-24
အော်ဒါမှာလိုက်တဲ့အခါငါသံသယရှိတယ်။ သူတို့ဟာတကယ့်ကိုကောင်းတဲ့ပုံပဲ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကအရည်အသွေးမကြီးဘူးဆိုရင်ပြန်ပေးဖို့အသင့်ရှိတယ်။ သို့သော်သူတို့သည်သေတ္တာထဲမှကြည့်။ ကောင်းသည်၊ တပ်ဆင်ရန်နှင့်ပြီးပြည့်စုံစွာအလုပ်လုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ဒီအပြောင်းအလဲရှိရင်မင်းသိအောင်ငါပြောပြမယ်၊ ငါအခုထိသူတို့ကို ၀ ယ်ဖို့နောင်တမရဘူး၊ နှစ်ထပ်အချည်းနှီးအတွက် ၂ စုံဝယ်လိုက်တယ်။
: D *** ဌ2020-04-25
ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုစတင်သောအခါဤရေပိုက်ကိုနောက်ထပ်နှစ်ပတ်ထပ်မံတပ်ဆင်မည်မဟုတ်ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကျွန်ုပ်သေချာပေါက်ပြောနိုင်သည်မှာဤ faucet ၏ပုံပန်းသဏ္reallyာန်သည်အလွန်ကြီးပြီးအဓိကအပိုင်းသုံးပိုင်းသည်အထည်များပါ ၀ င်သည့်အရာများဖြစ်သည်။ ဤသည်သည်ဤထုတ်ကုန်၏အရည်အသွေးနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်သေချာပေါက်မျှော်လင့်ပါသည်။
L ကို *** ဃ2020-04-26
ငါမျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပိုမိုလေးလံသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချည်းနှီးသောအရာအပေါ်ကြီးစွာသောကြည့်ရှုသည်။ လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်သည်။ လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများအားလုံး faucet ဖြင့်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသဆိုင်၌အလားတူပစ္စည်းကိုတွေ့ရှိခဲ့သော်လည်းဤဈေးနှုန်း၏ ၃ ဆကုန်ကျသည်။ နောက်တဖန်ဝယ်လိမ့်မယ်
R ကို *** ဃ2020-05-02
ငါရေချိုးခန်းအသစ်များနှင့်အတူငါ့လန်းဆန်း။ ဤသည် faucet ငါလိုချင်အတိအကျခဲ့ပေမယ့်ကြီးမားတဲ့သေတ္တာစတိုးဆိုင်များတွင်လမ်းအလွန်စျေးကြီးခဲ့သည်။ ငါမတွေ့မချင်းငါမနှစ်သက်သောအရာတစ်ခုအတွက်ငါအခြေချခဲ့သည်။ အခုငါအရမ်းပျော်တယ်
တစ်ဦးက *** ဋ2020-05-04
ငါကကန်ထရိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဒီဟာတွေကစျေးနှုန်းအတွက်တကယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်။ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူရုံအလွန်ကောင်းစွာလုပ်နှင့်ထုပ်ပိုး။ Big-box စတိုးများတွင်တူညီသော faucet သည်စျေးနှုန်းထက်နှစ်ဆပိုသည်။
ငါချက်ချင်းဒီ faucet ၏ကြည့်ကြိုက်တယ်။ ငါမကြာသေးမီကအသစ်သောအချည်းနှီးဝယ်ယူနှင့်ဤသည်ကြီးလှပါတယ်။ ငါအကြံပြုနှင့်ငါထုတ်ကုန်နှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်မိပါတယ်။
ငါ *** s ကို2020-05-07
ဒီ faucets တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေချိုးခန်းကို update လုပ်ဖို့ပဲလိုတာပါ။ ကောင်းသောစျေးနှုန်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းပေးပို့နှင့်အတူကောင်းသောဒီဇိုင်း & အရည်အသွေး။
R ကို *** ဎ2020-05-08
ရေချိုးခန်းထဲမှာ2Installed
အဆိုပါ faucet ကောင်းစွာလုပ်နှင့် instillation အလွန်လွယ်ကူသည်။ သူတို့သတ္တု fittings အမျိုးသားရေးပိုက်စံချည်ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြခဲ့ပါဘူးလုံလောက်သောညွှန်ကြားချက်။ faucet လုံခြုံမှုရှိခြင်းကြောင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်သို့မဟုတ်အစားထိုးရန်ပိုမိုလွယ်ကူသွားမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် screw driver နှင့်သင်၏လက်ချောင်းများဖြင့်ဖယ်ထုတ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ Great design
S က *** ဃ2020-05-09
ငါဒီတစ်ခု၏ကုန်ကျစရိတ် 3-4 အချိန်ကုန်ကျ faucet ထုတ်လုပ်သူတိုင်းအကြောင်းကို install လုပ်ထားပါပြီ - အရည်အသွေးကောင်းသို့မဟုတ်ပိုကောင်း - တပ်ဆင်လွယ်ကူသောနှင့်ဝယ်ယူနှင့်အတူလုံးဝပျော်ရွှင်ခဲ့
တန်ဖိုးအလွန် အလွန်သန့်ရှင်းရှုပ်ထွေးသောကြည့်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်။ အကြှနျုပျ၏ရေပိုက်သမားကအရမ်းသဘောကျခဲ့ပါတယ်။ ငါ့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကတော့ touch drain stopper ပဲ။
S က *** ဎ2020-05-14
ဒါကတော်တော်လေး faucet, များစွာသောသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကသူဝယ်ချင်တဲ့အတွက်ပိုက်ဆံကငါဘယ်မှာလဲလို့မေးတယ်။
S က *** ဋ2020-05-15
အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ faucet တစ်ခုချင်းစီကိုသူတို့ရဲ့အထည်အိတ်တွေနဲ့ပတ်ပြီးသူတို့ကခြစ်ရာမကျစေအောင် - တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုသွင်းပေးရင်သူကအရမ်းလွယ်တယ်၊ ညွှန်ကြားချက်တွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိရင် - သူတို့မှာရေချိုးခန်း faucets တွေရှိလား၊ တစ်ခု
T က *** ဎ2020-05-16
Faucets တွေကအရည်အသွေးကောင်းတယ်။ Install ပြnoနာမရှိနှင့်ကောင်းစွာသွားလေ၏။ ငါကြိုက်နှစ်သက်သောတစ်ခုတည်းသောအရာမှာရေပေးဝေရေးလိုင်းများသည်အနည်းငယ် ပို၍ ခိုင်မာသည်။ ရေလိုင်းများကိုဆက်သွယ်တဲ့အခါသတိထားရမယ်။
WOWOW Chrome High Arc ရေချိုးခန်းသုံး Faucet
Pop-Up Dra နှင့်အတူ WOWOW Centerset ရေချိုးခန်း Faucet ...
WOWOW လူပျိုရေချိုးခန်း Faucet Matte Black
အမေရိကန် CONTACT China Address: 119Th Berth၊ ပထမထပ် No.1 Yanjiang East Road Shui Kou Town Kai Ping City Guang Dong စီရင်စုတရုတ် +86 19927601787 (နံနက် ၉ နာရီမှ ၁၈ နာရီ GMT + ၈) E-mail: sales@wowowfaucet.com
မူပိုင်ခွင့်© 2020-2025 WOWOW INC ။ All Rights Reserved ။